रिस किन उठ्छ? कसरी कम गर्ने? – Health Post Nepal
२०७८ मंसिर ४ गते ११:२५
मानिस भएपछि विभिन्न खालका भावनाहरुसँग बाँधिएर बाच्नुपर्छ। जिवनभरमा कहिले खुशी, दुःख, डर तथा रिस भोग्नुनै पर्दछ।
नेश्नल लाइब्रेरी अफ मेडिसिनका अनुसार रिस पनि अरु भावनाहरुजस्तै शरीरको सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमबाट उत्पादन हुन्छ।
रिससँग जुझ्न निकै कठिन छ। कहिलेकाहीं रिसले आफ्नो शरीरलाई नोक्सान पु¥याउने देखि वर्षौंदेखिको सम्बन्ध पनि टुटाउन सक्छ। त्यसैले
आफ्नो रिसलाई बुझेर व्यवहार गर्न जरुरी हुन्छ।
तनावलाई बुझ्न सके रिस कम हुन सक्छ
हाम्रो शरीरमा वा भनौं दिमागमा तनाब (स्ट्रेस) हर्मोन हुन्छ। जब हामी रिसाउँछौं, तब यो हर्मोन निकै चाँडो फैलिन्छ, जसले गर्दा विभिन्न खालका समस्या निम्त्याउँछ। शरीमा यस्तो हर्मोन धेरै भए रोगसँग लड्ने क्षमता (इम्युनिटी)लाई कम्जोर बनाउँछ भने रक्तश्राव पनि बढाउँछ।
कतिपय मानिस चाँडै रिसाउने वा छिन छिनमै रिसाउने गर्दछन् भने कतिलाई हल्का रिस उठ्ने मात्र हुन्छ। धेरै रिस उठेको समयमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन पनि हुन्छ। रिस त्यो भावना हो जुन चाँडै देखाउन वा सजिलै देखिने भाव हो।
यसलाई नियन्त्रण गर्न यसको श्रोत पत्ता लगाउन जरुरी हुन्छ।
कसरी नियन्त्रण गर्ने रिस?
रिस उठेको समयमा मानिसले जे पनि गर्न सक्छ। जब रिसको सिमा नाघ्न थाल्छ, सोही समयमा नै आफूलाई नराम्रो हुनबाट रोक्नुपर्छ। रिसाएको समयमा के बोलिन्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन, त्यसैले उक्त समयमा सोचेर बोल्ने वा केही बोल्नु अघि लामो स्वास तान्ने र १ देखि १० अंकसम्म गन्ने।
आफूलाई रिस उठेको छ भने, त्यो वातावरण छोडेर अन्य कुनै ठाउँमा गएर ताजा हावा लिन जानुपर्छ। ताजा हावा लिँदा रिस कम हुन थाल्दछ।
केही समय अंक गन्ने र ताजा हावा लिएर रिस कम भएपछि पुन वार्ता गर्न जाँदा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
कहिलेकाहीँ प्रयाप्तरुपमा आराम पाएन भने पनि रिस उठ्न थाल्दछ। त्यस्तै, रातमा निन्द्रा पुगेन भने पनि तनावको सामना गर्नुपर्ने हुुन्छ। त्यसैले पनि आराम गरेर तनाव घटाउन जरुरी हुन्छ।
कहिलेकाहीँ केही कुरामा विवाद हुदाँ आफ्नो कुरा नै सही भन्ने व्यक्तिहरु पनि हुन्छ। आफ्नो दृष्टिकोणलाई माथि राखेर हेर्ने व्यक्तिहरुसँग विवाद हुँदा दुवै दुष्टिकोणबाट हेरेर अरुलाई बुझ्ने प्रयास गर्दा रिस नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
यदि रिसको सिमा नाघ्न थाल्यो र केही नोक्सानी होला जस्तो लाग्न थाले, त्यस्तोमा तेस्रो व्यक्तिसँग मद्धत माग्दा सहज हुन सक्छ। तेस्रो व्यक्तिले दुबै पक्षलाई सम्झाउने र नियन्त्रण गर्न मद्धत गर्दछ।
धेरै रिस उठ्दा त्यसलाई व्यक्तिमा केन्द्रित नगरी कुनै सकरात्मक चीजमा व्यक्त गर्न सकिन्छ। रिस उठ्दा फुटबल तथा बास्केटबल वा कुनै खेल खेल्दा राम्रो हुन्छ। वा यो समयमा व्यायाम गर्न सकिन्छ। यस्तो गर्दा राम्रो महसुस हुन्छ र इन्डोंफिन्स दिमागमा उत्पन्न भएर रिस नियन्त्रण गर्न सहज पुग्छ। कतिपय व्यक्तिले यस्तो समयमा दाउरा चिर्ने, आफ्नो भावनाका बारे लेख्ने जस्ता काम गर्छन्। आफ्नो रिस कम गर्न कस्तो खालको कार्य राम्रो हुन्छ, सो कार्य गर्दा उपयुक्त हुन्छ।